Zvinyorwa zveRyan Crozier pamusoro Martech Zone |
Zvinyorwa na Ryan Crozier
Ryan Crozier ndiye muvambi we Sangano Boon, dhijitari rekushambadzira agency rinotarisana nekubatsira vanhu kuita zvakanaka pamhepo. Ane makore gumi nemashanu + ekushambadzira ruzivo uye akabatsira akawanda emabhizinesi kuita iyo NhauBrand fomati mukushambadzira kwavo.
Maitiro Ekumisikidza Rakareruka 5-Nhanho Pamhepo Kutengesa fanera
China, June 25, 2020 China, June 25, 2020 Ryan Crozier
Mukati memwedzi mishoma yapfuura, mabhizinesi mazhinji akachinjisa kushambadziro yepamhepo nekuda kwe COVID-19. Izvi zvakasiya masangano mazhinji nemabhizimusi madiki achitsvanzvadzira kuti vauye nemaitiro anoshanda ekushambadzira edhijitari, kunyanya iwo makambani aivimba zvakanyanya pakutengesa kuburikidza nezvitoro zvavo zvezvidhinha. Nepo maresitorendi, zvitoro zvekutengesa, uye nevamwe vazhinji vari kutanga kuvhura zvakare, chidzidzo chakadzidzwa pamwedzi yakati wandei yapfuura chiri pachena - kushambadzira kwepamhepo kunofanirwa kuve chikamu cheako zvese